Dadka sharcidarra ah oo aan helin daryeelka uu sharcigu xaqa u siinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Karin Tengby/Röda korset/Scanpix
Dadka sharcidarra ah oo aan helin daryeelka uu sharcigu xaqa u siinayo
La daabacay torsdag 14 november 2013 kl 13.10
In kastoo uu xagaagii la soo dhaafay soo baxay sharciga cusub oo dadka dalka ku jooga sharci-darrada xaq u siinaya daryeel caafimaad, ayeysan hadda dadkaas war u hayn sharcigaan cusub oo ay keento in mar walba oo ay tagaan goobaha daryeelka caafimaadka la weyddiiyo warqado aqoonsi iyadoo aqoonsi-la’aan dalka ku jooga. Sidaassna waxaa qoray ururka Dhakhaatiirta Caalamka oo daraasad ku sameeyey in lagu dhaqmo sharcigaas iyo in kale.
Gabar magaceeda lagu soo gaabiyey Elaine oo ka mid ah dadka sharcidarrada dalka ku jooga ayaa dhibaato kala kulantay kolkii ay la xiriirtay goobaha daryeelka caafimaadka iyadoo uur leh. Waxaana loo sheegay in lagu xiray in ay bixiso kharash badan si loogu ummuliyo isbitaalka dhalliinka.
– Maadaama aanan wax aqoonsi ah haysan waxaa la igu xiray inaan bixiyo kharash u dhexeeya 50 000 ilaa 100 000 oo karoon, ayey tiri Elaine.
Balse kadib markii uu ururka Dhakhaatiirta Caalamku uu soo dhexgalay ayaa lagu ummuliyey jeexitaanka caloosha oo looga saaray wiil xilligiisii saddex toddobaad ka soo hormaray.
Ururka dhakhaatiirta caalamka ayaa dabagal ku sameeyey ilaa kontomeeyo qof oo dalka sharcidarro ku jooga oo goobaha daryeelka caafimaadka ka doontay daryeelka caafimaad. Wuxuuna ururku halkaas ka ogaadey in afartii qofba midkood loo diido la siiyo daryeel caafimaad. Sidoo kale Laanqayrta cas oo iyaduna baaritaan ku sameysey intii ka dambeysey sharcigaan cusub ayaa qabta in ay jiraan aqoondarri aad u weyn loo leeyahay xuquuqda dadka sharcidarrada ah oo aan warqadaha aqoonsiga haysan. Johannes Mosskin oo xoghayaha guud ee ururka dhakhaatiirta caalamka ayaa arrintaan ka yiri:
– Maadaama ay soo baxday natiijo laga argagaxo marka laga hadlaayo in dadka sharcidarrada ah loo diido daryeel caafimaad, waxaa halkaas ka cad in aan wax walba sidii loogu talagalay loo qaban.